Public Health in Myanmar: အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၇) အမျိုးသမီး ပြီးခြင်း Female orgasm
ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရပါတယ် .. ကျေးဇူးပါ ဆရာ
မိန်းကလေးကို orgasm (အော်ဂဇင်) ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲ ?
အဲဒီ Post ရေးပြီးသားရှိရင်လည်း Link လေးသိချင်ပါတရ်
I've written about it as I understand. What is your question exactly?
ဒါဆို တစ်သက်လုံးမှာ တစ်ခါမှ အော်ဂဇင် မရဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီး ရှိဦးမှာပေါ့နော် ဆရာ
ပြီးတော့ သမီးတွေ့ ဘူးတယ်
လူနာတစ်ယောက် က ဗိုက်နာပြီးလိင်တံ အထဲပြန်ဝင်တာ
ပြီးတော့ မကြာခဏခြေသလုံး ကြွက်တက်တတ်တယ်
ပြီးတော့ တစ်ချိန်လုံး ခြေဖျားလက်ဖျား အေးနေတယ်
ဆရာရှင့် သမီး နောက်တစ်ခုမေးပါရစေ
ဘာကြောင့်ဒူးနောက် ၊ပေါင်၊လက်မောင်းတွေမှာ အကြောပြတ်ရသလဲ
1. ယောက်ျား ဘောကျတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ။ “Hernia အူကျခြင်း” ကို ဖတ်ပါ။ ဒီမှာ မတင်ရသေးဘူးလား မသိပါ။ တင်လိုက်ပါမယ်။
2. လူနာတစ်ယောက် က ဗိုက်နာပြီးလိင်တံ အထဲပြန်ဝင်တာ ဘာရောဂါလဲ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲ။ “အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃၆) Penile retraction တိုနာ ရောဂါ” ကို ဖတ်ပါ။ ဒီမှာ မတင်ရသေးဘူးလား မသိပါ။ တင်လိုက်ပါမယ်။
3. မကြာခဏခြေသလုံး ကြွက်တက်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ချိန်လုံး ခြေဖျားလက်ဖျား အေးနေတယ်။
4. ဘာကြောင့် ဒူးနောက်၊ ပေါင်၊ လက်မောင်းတွေမှာ အကြောပြတ်ရသလဲ။ “Stretch Marks အကြောပြတ်ခြင်း” ကို ဖတ်ပါ။ ဒီမှာ မတင်ရသေးဘူးလား မသိပါ။ တင်လိုက်ပါမယ်။
ဆရာ လိင် အင်္ဂါ အမွှေး ရိတ် တာကောင်း ပါသလား
သူမှာရည်းစားရှိတယ်လေ သူ့ရည်းစားကလည်း ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းဘဲလေ
အခုဖြစ်နေတာက သူကောင်မလေးကိုသူအ၇မ်းချစ်တယ် ဒါပေမယ့်သူအိမ်ကသူအမေကသဘောမတူဘူးဖြစ်နေတယ်
သူအခုonlineပေါ်မှာboy တွေနဲ့သူငယ်ချင်းထားတယ် ရိုးရိုးဆိုရင်တော့ပြောစရာမဟုတ်ပါဘူး
အခုဟာက သူ အဲဒါကောင်တွေနဲ့အပြင်မှာတွေ့ ဖုန်းတွေဆက်လိုက်နဲ့
ဟိုကဖုန်းဆက်လို့ မကိုင်လိုက်ရရင်ကို မနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်လေ
အခုတလော သူအပြင်မှာအဲဒီကောင်တွေနဲ့တွေ့ပြီး လိင်တူဆက်ဆ့ခဲ့တယ်လိုပြောတယ် တစ်ခါဆိုရင်တော့မသိလို့ပေါ့ အခုဟာကတစ်ခါမကတော့ဘူး လေးခါတောင်ရှိနေပြီး
Min Oo said...
မာစတာဗေ့ လုပ်တာများရင် ဒူးနဲ့ ဒူးနောက်မှာဘာလို့အ ကြော တွေ
လိင် တံ ရှည်အောင်ဘယ်လိုလုပ် ရ မလဲဆရာ
kuaw yazar said...
lwin thu said...
လိင် တံ ရှည်အောင်ဘယ်လိုလုပ် ရ မလဲဆရာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိင်တိုနေလို့ပါဆရာအသက်20ကျော်ပြီဆရာဒုက္ခေ၇ာက်နေလို့ပါဆရာပြောပြပေးပါ
ကိုယ် ပဲ ပုတ် said...
ဆရာတခု​လောက်​​မေးချင်​လို့ပါ။ ကိုယ်​ဝန်​တား​ဆေး​​တွေက ကိုယ်​ဝန်​ မရဖို့ကို ဘယ်​​လောက်​ရာခိုင်​နှုန်းထိ ကာကွယ်​နိုင်​သလဲ သိချင်​ပါတယ်​ဆရာ။ တာ​ဆေးသုံးထားတာ​တောင်​ ကိုယ်​ဝန်​ရတာမျိုး​တွေ​ကောရှိပါသလားဆရာ။
chit sar said...
ကျော်ထက်အောင်(Moe's Lover) said...
ဆရာ.သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်အင်္ဂါဟာ အခု သူ့အသက် ၁၉.၂၀ ရောက်ပေမဲ့ သူရဲ့ လိင်ထိပ်ကအရေပြားက မပွင့်သေးပါဘူး..သူလည်းအဲဒါကိုတော်တော်ရှက်နေပါတယ်.အဲဒါဘာဖြစ်တာလဲ ဆရာ.ပြီးတော့ လိင်သူ့အင်္ဂါက ၂ လက်မခွဲလောက်ပဲရှိပါတယ်.အဲဒိကို ဘယ်လိုကုသနိုင်ပါသလဲ ဆရာ.ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါ ဆရာ.(ထာဝရကျေးဇူးတင်လျက်ပါ)
မိန်းမရ လိူ့ သူ့မိန်းမနဲ့ဆက်ဆံရင် ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်
su su Wine said...
လိင် ဆက်ဆံတိုင်းယောကျားက ဆန္ဒရှိလို့ သာသူကယောကျားစိတ်တိုင်းကျလိုက်လျောရသလိုအမြဲပြောတယ်ဆရာ။ ဆက်ဆံနေစဉ်နဲ့ ဆက်ဆံပြီးရင်လဲကောင်းလားမေးရင်(သူကောင်းနေမှန်းကျနော်သိလျက်) ဝေ့လည်ချောင်ပတ်နဲ့ မဖြေဘူးဆရာ။ သူမေးလို့ ကျနော်မဖြေရင် ပြသနာရှာတယ်ဆရာ။ သူတို့ မှာလည်း လိင်စိတ်၊ လိင်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဆိုတာ လက်မခံဘူးဆရာ။
ဆရာ​ရေ ကူညီပါ လိင်​တံ​ကောက်​တာကိုဘယ်​လို​ဖြောင်​လို့ရလဲ ​ဆေးရှိလား ဒါမှမဟုန်​သဘာဝအတိုင်းပဲလို့လို့ရလား